Taliyaha ciidanka booliska Puntland oo booqday deegaanka Qaw ee gobolka Bari. – Radio Daljir
Taliyaha ciidanka booliska Puntland oo booqday deegaanka Qaw ee gobolka Bari.
Diseembar 5, 2016 10:25 b 0
Boosaaso, Dec 05 2016-Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen. C/qaadir Shire Faarax Erag oo wali ku guda jira Kormeero uu ku kala bixinayo Xarumaha Booliska Gobalka Bari ee Puntland ayaa maanta tagay Deegaanka Qow oo Qiyaastii 40 KM u jira Magaalada Bosaso ee Xarunta Gobalka Bari.
Taliyahaya ayaa u jeedka kormeekiisa Qow ku sheegay Tirakoobida Ciidama Booliska ee Deegaankaasi iyo bixinta wacyigalin la xiriirta isfahamsiinta shacabka iyo Booliska Deegaanada ka baxsan Laamiga ee ka tirsan Gobalka Bari.
Sidoo kale Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen. Erag ayaa booqday Dekadda Bossaso oo ay ku so dhaweeyen Taliyaha Ciidamada Dekadda Bossaso Maxamed Cali Xaashi iyo Saraakiil kale,isagoona kulan gaar la qaatey Madaaxda Dekada ,ayna ka wada arinsadeen sugida Amniga Dekada iyo taynta Ciidamada ka Howl-gala Taliska Booliska Dekada Bosaso ee Xarunta Gobalka bari.
Dhinac kale Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland ayaa Booqday Kaantaroolka Laag iyo kan laga so galo Magaaladda Bossaso oo kullamo gaar-gaar ah kula qaatey Taliyaasha ciidamada,kuwaaso inta badan uu kala hadlayay in la xoojiyo baarintaanada Gaadiidka iyo Rakaabka ay sidaan iyo sidii Cidii ay ka shakiyaan baarintaano ugu samayn lahaayen,iyagoo ilaalinaya Sharciga iyo Xuquuda Mawaadinka.
Ugu Danbayntii.Taliyaha Booliska Puntland ayaa Dhamaan Saraakiishii Ciidamada ee u la kulmay uga waramay qaabka ay u noqon karaan Macalin Tusaale u ah ciidamadooda kuna dayndaan ,iyadoona qaabkaasi uu raaciyay in Ciidamada markii u dhamaado Tirokoobkoodu uu Abaal-marino siindooono Saraakiisha sida wanaagsan Dadka iyo Dalka ugu shaqeeya.
Ra’iisul Wasaare Cumar Oo Aqbalay Codsi Uga Yimid Odayaasha Soomaaliland.